Ndị na -emepụta Boom Lift & China Ọganihu ebuli Factory
Mbuli eluNke a bụ ngwaahịa dị mkpa na ụlọ ọrụ na -arụ ọrụ na mbara igwe nke gụnyere ebuli elu na -adọkpụ elu, mbuli elu na -egosipụta onwe ya na telescopic. , mbuli elu nke onwe na -ebuli elu, ihe eji ebuli elu aluminom na ikpo okwu ọrụ ikuku ndị ọzọ, ọ dị mkpa ka eburu nnukwu ụgbọ ala si n'otu ebe gaa ebe ọzọ. Oghere na -arụ ọrụ sara mbara: dị iche iche na -ebuli isi, mbuli elu aluminom na mbuli elu vetikal ndị ọzọ, ebuli ebuli elu nwere ike ọ bụghị naanị na -arụ ọrụ na vetikal mana ọ nwekwara ike rute ebe dị anya site na 5.2m ruo 9.5m.
Ụdị Towable China Boom Lift Articulated Towable bụ usoro ọrụ ikuku dị mkpa na ọrụ anyị kwa ụbọchị, ọ bụ akụ na ụba na ịrụ ọrụ nke ọma ma e jiri ya tụnyere ebuli elu nke onwe.
Ụgbọ elu na -ebuli elu nwere ike ime ka ọ dabara na mpaghara arụ ọrụ nke ọdụ ụgbọ mmiri. A ga -ejikwa breeki a pụrụ ịdabere na ya na -aga ije ma na -enwe ọganihu n'elu ikpo okwu iji hụ na a na -ejikwa njikwa na mgbago na mgbe ọ na -arụ ọrụ.
Daxlifter Self Moving Articulated Boom Lift na ike batrị bụ ngwaahịa dị na katalọgụ mmepụta anyị.
Telescopic Boom Lift nke nwere onwe ya na-eji ike mmanụ ọkụ dabara maka ojiji na nnukwu ebe a na-ewu ụlọ, ụgbọ mmiri, ịrụ akwa na ọrụ ndị ọzọ, yana ngagharị na-enweghị atụ na ike ịrụ ọrụ nke ọma. N'ezie, ọnụ ahịa ya dị oke elu.
Ebe kachasị mkpa nke mkpali mmụba telescopic na -akpali onwe ya bụ na ọ nwere ike rute elu ikpo okwu dị elu ma e jiri ya tụnyere ihe na -eme ka ọ dị elu.
Ọnụma na -arụ ọrụ zuru oke na -eme ka ọ dabara maka ụdị okwu Okwu. Enwere ike iji ihe owuwu ihe pụrụ iche ma n'èzí na n'ime ụlọ. Enwerekwa ọtụtụ uru nke mbuli elu ebuli elu anyị, German AL-KO Retractor nwere breeki na-adọba ụgbọala na breeki inertia. Drag Rod na -enweghị ike ịgagharị maka njem dị mma na akpa. Mmanụ mmanụ ụgbọ mmiri nwere sistemụ nzacha: ma ụzọ mbata mmanụ na ụzọ ọpụpụ mmanụ nwere ihe nrụpụta, nrụgide nrụgide agaghị abụ 0 ọzọ otu ugboro na-egbochi ụzọ adịghị ọcha.